को-रोना भाइरस लाई हराउन गाईको दुध बन्यो चिनकाे लागि ठूलाे ह`तियार, यस्ताे रहेछ तरिका ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं – Annapurna Daily
को-रोना भाइरस लाई हराउन गाईको दुध बन्यो चिनकाे लागि ठूलाे ह`तियार, यस्ताे रहेछ तरिका ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं
On Jun 9, 2021 137
एजेन्सी । अहिले विश्वभरी नै को’ रोनाको महामारीले आतंक मच्चाइरहेको भए पनि केही देशहरुले भने यो महामारीबाट केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण गरिरहेका छन् । यसैबीच, चीनका मानिसले को- रोनालाई हराउनका लागि गाईको दुधको साहरा लिइरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्दा सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ ।
शरीरमा प्रोटीनको मात्रा बढाउनका लागि चीनको सरकारले त्यहाँका मानिसलाई धेरैभन्दा धेरै गाईको दुध पिउन भनि रहेकाे छ । प्रोटीनले इम्यून सिस्टम बलियो बनाउँछ भन्ने दावी गरिहएको छ ।
पछिल्लो वर्ष को- रोना फैलिएपछि चीनको संसदको वार्षिक बैठकमा त्यहाँका कानून निर्माताहरुले सरकारलाई दुध पिउने बारेमा पनि कानून बनाउन सुझाव दिएका थिए जसमा हरेक व्यक्तिले प्रतिदिन कम्तिमा ३०० ग्राम दुध पिउने सल्लाह दिइएको थियो । ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार शांघाई केहुआशान अस्पतालमा संक्रामक रोग विभागका प्रसिद्ध डाक्टर झांग भेनहोंगले संक्रमणको शुरुवाती क्रममा चीनका अभिभावकहरुलाई एउटा विशेष सल्लाह दिएका थिए ।
डाक्टर भेनहोंगले आमा बुबा दुबैले आफ्ना बालबालिकालाई बिहान दुध र अण्डा खान शुरु गर्नु भन्ने सल्लाह दिएका थिए ।ब्रेकफास्टमा पोर्रिज दिन बन्द गर्नु पर्छ । चीनका विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममा दुध पिउने बाध्यतालाई लिएर वहस पनि चलेको थियो ।
चीनमा प्रायस् मानिस ब्रेक फास्टमा बन र पोर्रिज खान्छन् । आफ्नो परम्परागत खाजा छाडेर दुध र टोस्ट खानु कति सम्म सही हो भन्ने चीनका मानिसहरुको भनाइ रहेको छ ।
खानपानमा कुनै पनि किसिमका परिवर्तनले को- रोना भाइरस हुनबाट बचाउन सक्दैन र भोजनमा प्रोटीन समावेश गर्ने अरुपनि धेरै तरिका भएको चीनका मानिसहरुको धारणा रहेको छ ।
चीन सरकारले सन् २०२५ सम्म ४ सय ५० लाख टन दुध उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन अहिलेसम्मको उत्पादन भन्दा ३० गुणा धेरै रहेको छ । चीनमा गाईको हेरचाह र खानपानमा पनि अहिले विशेष ध्यान दिन थालिएको छ ।
यद्यपि चीनका विभिन्न पशु कल्याण समूहले विभिन्न अध्ययनलाई आधार बनाएर यस कुरामा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले गाईको दुध पिउनाले क्यान्सर, मधुमेह र मुटु सम्बन्धि विभिन्न समस्या हुन सक्ने बताएका छन् ।
चीनका प्रायस् मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमा दुध पिउने बानीलाई बढावा पनि दिइरहेका छन् । केही विशेषज्ञहरुका अनुसार पशुहरुमा एउटा विशेष किसिमको एन्टिबडी पाइन्छ । दुध पिउनाले उक्त एन्टिबडी शरीरमा गएर इम्यून सिस्टमलाई बलियो बनाउँछ। एजेन्सीको सहयोगमा